Hampiaka-danja ny vola zambiana ve ny vavaka? Mino izany ny Filoha Lungu · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Oktobra 2015 19:31 GMT
Sary Tanana Mivavaka, asa-kanton'i Albrecht Dürer azon'ny rehetra ampiasana.
Nidina haingana manoloana ny dolara Amerikana, ny livra Britanika sy vola goavana hafa ny sandam-bola Zambiana, Kwacha, midika hoe “fiposahan'ny masoandro” amin'ny tenim-paritra sasany ao an-toerana tao anatin'ny volana vitsivitsy. Nampihena ny famatsiana herinaratra ireo orinasa fitrandrahana sy ny orinasam-panodinana akora ary ireo mpanjifa ao an-toerana ny fihenan'ny tinadin'i Shina varahina, ary nanampy trotraka tamin'ny fidinan'ny sandambola ny tsy fahaiza-mitantana ara-toekarenan'ny governemanta.
Vao haingana ny sampan-draharaham-baovao iraisam-pirenena Bloomberg no nanamarika ny Kwacha, izay vao nokajikajin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao indray volana vitsivitsy lasa izay, ho toy ny vola ratsy fivoatra indrindra teo amin'ny tsena iraisam-pirenena .
Manoloana izay toe-javatra manjombona izany, niantso ny hanaovana vavaka sy fifadian-kanina eo amin'ny firenena amin'ny 18 Oktobra nzao ny Filoha Edgar Lungu hangataka amin'Andriamanitra hiditra an-tsehatra amin'ireo olana marobe ao amin'ny firenena. Nandritra ny fotoana nanambarana ny androm-bavaka dia nilaza ny biraon'ny seraseram-bahoaka ao amin'ny Lapam-panjakana hoe:
Nilaza ny filoha fa tsy azo ihodivirana ny fanapahan-kevitra manoloana ireo fanamby marobe atrehin'ny firenena, anisan'izany ny olana ara-tsosialy sy ara-toekarena, ny tsy fanajana ny zokiolona sy ny tsy fisian'ny fahalalam-pomba mandritra ny resaka; ny tahan'ny tsy fananan'asa avo dia avo eo amin'ny tanora ary ny taha ambonin'ny fahantrana, ny fidinan'ny sandambola Kwacha ary koa ny delesitazy noho ny tsy fahampian'ny herinaratra.
Nandray ohatra tamin'izany, pasitera 50 teo ho eo avy ao amin'ny tanàndehibe faharoa any Zambia, Kitwe, no nivory tamin'ny alalan'ny firahalahian'ny mpitandrina ao Kitwe hivavaka hampiakatra ny lanjan'ny vola kwacha.
Notononin'ireo tranonkala fampitam-baovao an'olo-tsotra maro ny tsongatenin'iray amin'iray amin'ireo pasitora, Kautemba Phiri, ho mason'i Zambiana nanambara ny hanaovana ny fivoriana :
Avelao izahay hahazo ny vola taratasy kwacha ary hivavaka ho an'ity vola ity hiakarany vidy. Tokony hivavaka isika mba hahazoan'ny kwacha ny hery ilaina manoloana ireo vola iraisam-pirenena fanakalozana
‘Pasitera ô, azafady, alaviro anay ny tantara an-tsehatrareo’
Naneho hevitra tamin'ny tantara ny mpamaky iray antsoina hoe Ulukungu mu Zambia (tsy misy rohy ny fanehoan-kevitra) :
Midika fa tsy takatrareo ny toekarena matoa mivavaka hihatsaran'ny sandam-bola ianareo. Tsy asan-devoly ny fihenan-danjan'ny vola kwacha. Raha heverina fa mahazo tombotsoa amin'ny fanondranana vokatra bebe kokoa ny mpanondrana entana. Dia tokony hanontany tena ny firenena hoe nahoana izy no manafatra bebe kokoa noho ny manondrana. Ny famahana ny toe-draharaha no ilaina fa tsy vavaka isian'ny fahagagana hihatsaran'ny Kwacha
Nanontany kosa i Jabu hoe:
Mitomania ry firenena malalako! Ny olana ao Zambia dia ny tsy fahafahana na fialana an-daharana tamin'ny taona faha-7, faha-9 na faha-12 nianarana teo amin'ny ankamaroan'ilay lazaina fa mpitondra fivavahana. Ary inona no andrasanao manoloana ireo tsy fahombiazana miavosa tsy mahita ny mihoatra ny orona? Be loatra ny angatahanao amin'Andriamanitra! Aza ampidirina amin'izany Andriamanitra!
Nanontany tena i Yangu :
Oviana no mbola nisy vola nitombo lanja noho ny vavaka?
Namazivazy an'ireo pasitera kosa i Inkoko:
Tompo ô, ataovy miaka-bidy ho K2 isaky ny dolara tahaka ny tamin'ny taona 1964 tamin'ny nanomezan'ny fitondran'i Welensk anay Kwacha matanjaka ny vola Kwacha. Miangavy aho Tompo, aoka hanjavona ny lavaka amin'ny arabenay ary enga anie mba hisy jiro isaky ny tanàndehibenay rehetra, ny tanàna antonony ihany koa ary koa ny zana-bohitra. Aoka mba hisy takela-by momba ny fifamoivozana ny arabe rehetra ao Zed [Zambia], firenena Kristianina izay mino fa afaka milatsaka tsy ho an'ny Isiraelita ihany ny mana fa ho an'ny zediana ihany koa. Aoka hiroborobo ihany koa Tompo ô ny tohodranon'i Kariba [loharanon'herinaratr'i Zambia lehibe indrindra. Miaina delesitazy ankehitriny ny firenena na dia mandeha amin'ny heriny manontolo aza ary ataovy mahazo fitarihan-drano i Kanyama [ambanin-tanàna lehibe ao an-drenivohitra ] mba hanjavona ny kolerà mandritra ny vanim-potoanan'ny orana. Tompo ô, ataovy misy dikany amin'izay ny lazain'i Kambwili “
Nanoro hevitra i Tyga:
Pasitera ô, esory aminay ny sinemanareo.
“Tsy ny vola taratasy no toekarena”
Nibilaogy momba ny raharaha i Conrad Mbewe, pasitera batista iray nanazava izay manahirana azy mikasika ilay vavaka:
Ny manahirana ahy dia ny nahitako fa nangatahana ny pasitera tsirairay mba hamoaka kwacha avy ao anaty paosiny ary handrangaranga izany avo mandritra ny fihaonam-bavaka. Raha nivavaka amin'ny fiteny isan-karazany ny pasitera sasany, ny hafa kosa naminany fa hiaka-danja ny vola ao anatin'ny telo volana ny vola.
Avy eo, nangonina ny vola taratasy kwacha ary nentina teny amin'ny alitara izay ahitana ireo lohandohan'ny pasitera mbola manohy mivavaka ho an'ireo vola taratasy. Avy eo nangonin'ireo pasitera indray ny volan'izy ireo ary nanohy nivavaka ho an'ireo vola izy ireo mba hahazo lanja.
Raha maro ireo olona namaly ny takelaka fanehoan-kevitra ary niantso izany toy ny vazivazy, namaly ny olona nandefa rohy tamiko aho izay milaza izany ho famosaviana aho. Rehefa nivoaka Facebook ny fangatahana, dia nisy olon-kafa nanontany “Inona ity famosaviana ity?” Ity ny valinteniko.
Ny volan'ny banky tsy ekônômia
Araka ny efa nolazaiko, tsy misy maharatsy azy ny olona miara-miombo-bavaka ho an'ny toekarena Zambiana. Fankasitrahana feno fanetre-tena ny vavaka fa mila an'Andriamanitra isika mba hiditra an-tsehatra amin'ny toe-javatra manahirana antsika. Koa hatreto dia ilaina ny tompon-kevitry ny fanentanana tahaka izao.
Na izany aza, rehefa manomboka manafangaro ny somnin-taratasy amin'ny toekarem-pirenena ny olona nandia fianarana dia eo aho no manomboka miahiahy. Tsy ny sombin-taratasy ao anaty paosintsika no diso. Fa ny toekarem-pirenen'i Zambia izay marary. Tsy afaka mitondra izany ao anaty paosintsika isika.
Hoy izy namarana:
Ny hevitra maka ny volanay ao anaty paosy sy manofahofa izany ho tazan'ny rehetra, manangona izany ao anaty harona ary mametraka izany ao amin'ny alitara noforonina an-tsaina no mametraka ny toekarena ho any amin'ny tontolon'ny famosaviana fa tsy ho any amin'ny tontolo kirisitianina ara-baiboly.